ဂီတအဖွဲ့များ - Dame Ocio | ငါ့ကိုအပန်းဖြေပေးပါ (စာမျက်နှာ ၂)
Backstreet Boys, "ပိုကြီး"
http://www.youtube.com/watch?v=w_0-O22oP8U Ayer veíamosalos Backstreet Boys en vivo en el programa de TV de ‘Jimmy Kimmel Live’ haciendo «Straight…
Deep Purple သည် double album ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သြဇာအရှိဆုံးတီးဝိုင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော Deep Purple သည်သူတို့၏အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အခန်းကဏ္သစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Jimmy Kimmel Live တွင် Backstreet Boys
http://www.youtube.com/watch?v=6Incs6VkWxY Hace unos días, los Backstreet Boys se presentarpn en el programa de TV ‘Jimmy Kimmel Live‘einterpretaron su…
The Fabulous Cadillacs, "Contraband of Love"
Cadillcas သက်တမ်းတိုးသလား။ ယခုအယ်လ်ဘမ်အသစ် 'El Arte de la Eleganza' မှပထမဆုံး single သီချင်းဗီဒီယိုကိုယခုတွေ့နိုင်သည်။
U2 သည် Sevilla အတွက်အရောင်းစံချိန်ကိုချိုးဖျက်ခဲ့သည်
စပိန်၌ U2 စုစုပေါင်းအောင်မြင်မှု၊ အိုင်းရစ်လူမျိုးတို့သည်လက်မှတ် ၄၃ ဝဝဝကျော်ရောင်းချသောပထမနေ့၌ ...
Panda သည် MTV Latin America ဆုပေးပွဲတွင်လှောင်ပြောင်ခြင်းခံရသည်
ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့ကမက္ကဆီကို၌ကျင်းပခဲ့သော MTV လက်တင်အမေရိကဆုပေးပွဲမတိုင်မီတွင်ဒေသခံ Panda အုပ်စုသည်အောင်မြင်သည်။
"Equinox မှာဆုံပါ"၊ Cutie အတွက် Death Cab မှဗီဒီယိုအသစ်
မနေ့ကကတည်းက New ရဲ့တေးသံထဲကပထမ ဦး ဆုံး single ကို ...
Liam Gallagher: "Oasis ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး ... Noel မပါဘဲငါတို့ဆက်သွားမယ်"
ပရိသတ်များသည်ဤအရေးပါသောအင်္ဂလိပ်အဖွဲ့၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပြီးအချို့က Noel မပါဘဲဆက်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Amy Lee သည် Evanescence ၏အနာဂတ်အကြောင်းပြောသည်
“ မင်းတော်တော်များများကငါ့ဂီတကိုလွမ်းတယ်၊ လာမယ့်အရာအကြောင်းမင်းကိုငါပြောချင်တယ်။
AC / DC: ARIA ဆုလေးဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည်
Guns 'n' Roses သည်ခိုးကူးစွပ်စွဲမှုများကိုတုံ့ပြန်သည်
The Guns 'n' Roses သည်သူတို့၏ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲပြီး၎င်းတို့အားဆန့်ကျင်သောစွပ်စွဲမှုများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
David Letterman Show တွင်နမ်းပါ
http://www.youtube.com/watch?v=ypdNg1Yh890 Kiss se presentó anoche en el programa de TV de la CBS ‘Late Show With David Letterman‘ y allí…
စနေနေ့: Kelly Clarkson အတွက်ရေးထားသော single သီချင်းအသစ်
ဗြိတိသျှ-အိုင်းရစ်အမျိုးသမီး quintet ကသူတို့၏ single သီချင်းအသစ်“ ထာ ၀ ရပြီးဆုံးသွားပြီ” ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး၎င်းတို့၏ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ကိုတင်ဆက်သည်။
ဒီအိုင်းရစ်အုပ်စုရဲ့နောက်လိုက်တွေသူတို့ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်၊ ထွက်ခွာပြီးနှစ်နှစ်အကြာ ...
Los Campesinos၊ "ဤအရာသည်စာရင်းဝင်အဆောက်အ ဦး များ"
Welsh Los Campesinos မှဗွီဒီယိုအသစ်!: "ဒါတွေဟာ Listed Buildings" ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထဲကပထမဆုံး single ...
"အလိုအလျောက်" အစုံရှိ Tokio ဟိုတယ်
အလိုအလျောက် - Tokio Hotel ၏မြင်ကွင်းများနောက်ကွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည်မှာ“ အလိုအလျောက်” ဟူသောနောက်ကွယ်မှဖြစ်သည်။
Working Men, Rush ၏အကြီးမြတ်ဆုံး hits
Metallica နှင့် Smashing Pumpkins ကဲ့သို့သောအဖွဲ့များကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သောတီးဝိုင်းသည်သူတို့၏သီချင်းများစုစည်းမှုဖြင့်မြင်ကွင်းသို့ပြန်လာသည်။
Trent Reznor သည် Gary Numan နှင့်အယ်လ်ဘမ်ကိုစီစဉ်နေသည်
Wave Goodbye ဖျော်ဖြေပွဲပိတ်ပြီးနောက် Nine Inch Nails သည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင် Trent Reznor မှတဆင့်ကြေငြာခဲ့သည်။
... ပြီးတော့ Johnny Ramone အတွက်လက်ဆောင်ကိုရခဲ့တယ်
လာမယ့်အပတ်တွေမှာ Los Ramones ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ရဲ့ပရောဂျက်ဖြစ်လာရင်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။
La Cabra Mecánicaသည်၎င်း၏ပွဲ ဦး ထွက်တွင် Lichis ဦး ဆောင်သောတီးဝိုင်းသည်အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် 'Meat of song' တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုစတင်လိမ့်မည်။
The Welsh ပြန်ရောက်ပါပြီ၊ 'Pull The Pin' ဖြန့်ချိပြီးနှစ်နှစ်အကြာနှင့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအကျော်ကြားဆုံးသောသီချင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
The Cranberries: သူတို့ရဲ့ comeback tour ကစပိန်ကိုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်
ဒီအာကာသမှာသတင်းထွက်ခဲ့သလိုပဲ Dolores O'Riordan ဦး ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကအခြားအရာတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
"East Jesus Nowhere": Green Day ၏ဗီဒီယိုအသစ်
'Berkeley trio', 21st Century Breakdown (နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်) ၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှု (နီးပါးသူတို့၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ် ...
Carl Barat: Libertines များနှင့်တွေ့ဆုံရန် 'အလွန်အလုပ်များသည်
တစ်ဖန် Carl Barat ကသူမစုစည်းမီလောလောဆယ်စဉ်းစားစရာများစွာရှိသည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
The Ramones: လမ်းမှာ biopic လား။
အလွန်ကြီးကျယ်သော FOX ၏ဌာနခွဲတစ်ခုသည် Ramones များ၏ဘဝစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆွေးနွေးနေသည်။
"Wheels": Foo Fighters ၏ဗီဒီယိုသစ်
ယခင်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Foo Fighters သည် Great Hits ၏စုစည်းမှုကိုယခုလတွင်စတင်လိမ့်မည်။
The Argentines Estelares သည်သူတို့၏ video clip အသစ်ကိုတင်ပြသည် - ၎င်းသည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်အသစ် Una Temporada မှဒုတိယမြောက်သီချင်း "Melancolía" အကြောင်းဖြစ်သည်။
'El Hormiguero' ရှိ Tokio ဟိုတယ်
http://www.youtube.com/watch?v=N99Vo9PvcAA Los alemanes Tokio Hotel están en España promocionando su nuevo disco ‘Humanoid‘ y han causado revuelo en cuanta presentación…
Graham Coxon: "လောလောဆယ်မဝေဝါးတော့ဘူး"
ဒီအင်္ဂလိပ်တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ့ဂစ်တာသမား Graham Coxon ကဖွင့်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
"နောက်ဆုံးအက": Raveonettes ၏ဗီဒီယိုအသစ်
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်တို့သည်လွမ်းဆွတ်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်နောက်ဆုံးအက၏အသံ၊ In နှင့် Out မှအခြားဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Thom Yorke နှင့်သူ၏အဖွဲ့သစ်သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်
တကယ်ပါပဲ။ Radiohead ၏ခေါင်းဆောင်သည်လာမည့်ရက်များအတွင်းသူ၏ 'တီးဝိုင်းအသစ်' နှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေလိမ့်မည်။
Paramore: သူတို့က 'soundtrack' လို့တံဆိပ်မတပ်ချင်ဘူး။
Hayley Williams က Twilight ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ New Moon ရဲ့သီချင်းသစ်ကိုအသံသွင်းဖို့သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ၌ Temptation တိုက်ရိုက်အယ်လ်ဘမ်
The Dutch Within Temptation ကိုမနှစ်ကနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာသူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ acoustic ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုနိုဝင်ဘာလပထမရက်မှာဖြန့်ချိလိမ့်မယ်။
AC / DC သည်ရှားပါးသော disc နှင့် DVD များကိုဖြန့်သည်
Hard rock တီးဝိုင်းသည်နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် Backtracks အမည်ဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖန်တီးမှုများကိုစုစည်းထားသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စကော့တလန် Quartet အဖွဲ့၏အဆိုတော်နှင့်ခေါင်းဆောင် Fran Healy ကသူ၏နောက်ထပ်အသံသွင်းဖျော်ဖြေပွဲသည်မြောက်အမေရိကသို့ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
"Cornerstone" (Humbug): Arctic Monkeys ၏ 2nd single
အချို့သော connoisseurs များက“ အုတ်မြစ်” သည် Humbug ၏အခိုင်မာဆုံးသီချင်းများ၊ နောက်ဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသီချင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။
လာမယ့်နှစ်မှာ Rock & Roll Hall of Fame မှာဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်ခံရမလဲ။
Rock & Roll Hall Of Fame အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုတရားဝင်ကြေငြာရန်မျှော်လင့်သော်လည်း ...
U2: ၂၀၁၀ တွင်ဥရောပခရီးစဉ်အသစ်
U2 သတင်း - အိုင်းရစ်ဂီတအဖွဲ့သည်လာမည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေရန်စပိန်သို့ပြန်လာမည်။
Foo Fighters: သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်မှသီချင်းများ
Foo Fighters များသည် Greatest Hits အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကိုဖြန့်ချိတော့မည်ဟုငါတို့ပြောပြီးပြီ။ အခုအဖွဲ့ကပေးလိုက်တယ် ...
မူဆယ်သည်နိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၁ ဖြစ်သည်
ဗြိတိန်မူဆယ်သည်ရပ်တန့ ်၍ မရသောကြောင့်အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ် The Resistance နှင့်အတူနိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၁ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
The Basement သံသရာကို DVD တွင်ဖြန့်သည်
Joe Perry: Aerosmith ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဒေါသထွက်သည်
ဤခရီးစဉ်အားဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့်မြောက်အမေရိကအုပ်စု၏နောက်လိုက်များသည်စိတ်ပျက်သောသူများသာမဟုတ်ပါ၊ မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ...
Alice In Chains: သူမ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်မှသီချင်းများကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်သည်
စက်တင်ဘာ ၂၉ တွင် Black Gives Way to Blue ကိုဖြန့်ချိပြီး Alice In မှပထမဆုံးအစအဆုံး ...
Amaral သည်“ တီးဝိုင်းအသစ်” ဖြစ်လာသည်။ Eva နှင့် Juan Aguirre သည်သူတို့၏နောက်လိုက်များဖြစ်သော The Sound Barrier ကိုရည်စူးသည်။
Sugababes: Amelle Berrabah သည်အဖွဲ့မှထွက်ခွာသွားသည်
Sugababes တေးသံရှင် Amelle Berrabah သည်အဖွဲ့မှထွက်ခွာသွားသည်။ မိန်းကလေးများ Los Angeles တွင်ရှိနေစဉ်အဆိုတော်သည်ထွက်ခွာသွားသည်။
La Oreja de Van Gogh သည်၎င်း၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုအောက်တိုဘာလတွင်စတင်ခဲ့သည်
၎င်း၏တည်ထောင်ထားသောအဆိုတော်နှင့်အတူစပိန်တေးဂီတအဖွဲ့ La Oreja de Van Gogh သည်၎င်း၏တေးဂီတသစ်ကိုဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
The Clash သည်အကျဉ်းသားများအားကူညီရန်ပြန်လာသည်
Joe Strummer မရှိတော့ပေမယ့်ပြန်လာတဲ့အခိုက်အတန့်ကအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးတီးဝိုင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။
The Smashing Pumpkins သည်သူတို့၏သီချင်းများကိုအွန်လိုင်းမှဖြန့်ပေးပါလိမ့်မည်
သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ Smashing Pumpkins, ပြောင် Billy Corgan, ခေါင်းဆောင် Billy Corgan တို့နဲ့ Radiohead လုပ်ခဲ့တာကိုသတိပြုပါ။
http://www.youtube.com/watch?v=k9m8ODwZ-yw Nuevo video de Placebo: en este caso, el próximo single de su último trabajo ‘Battle For The Sun‘, que…
Muse ၏ James Bond theme
ဒီအင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်းရဲ့ဒရမ်သမား Dom Howard ကသူတို့သုံးယောက်အတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအသံသွင်းဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောခဲ့တယ်။
Oasis: ၂၀၁၀ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းစာအုပ်သို့
တကယ်ပါပဲ။ Gallagher ညီအစ်ကိုတီးဝိုင်းသည်နောက် Guinness Book of Records တွင်ထပ်မံပါဝင်လိမ့်မည်။
Megadeth, "Headcrusher" ဗီဒီယို
သူ၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ် 'Endgame' တွင်ပါဝင်သော "Headcrusher" သီချင်းပါ Megadeth ၏ဗွီဒီယိုအသစ်ကိုငါတို့တွေ့ပြီးပြီ။
Snow Patrol, စုစည်းမှု
Snow Patrol သည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုမဖြုန်းတီးဘဲယခုကတည်းက၎င်း၏အကောင်းဆုံးသီချင်းများပါဝင်မည့် double compilation ကိုထုတ်ဝေသည်။
Fito & Fitipaldis သည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ဖြစ်သော I Before Ten Count အကြောင်းပြောသည်
Eclectic Fito & Fitipaldis ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရောင်းထွက်လိမ့်မည်။ မင်းရဲ့အဆိုတော်…
Crazy Old Women, ပြန်လာ
http://www.youtube.com/watch?v=i1QTGu9CUHo Otra banda de rock que está de regreso son los argentinos Viejas Locas, luego de varios años de ausencia….
Shaka Rock နှင့်ဂျက်လေယာဉ်ပြန်လာ
သြစတေးလျလူမျိုးဂျက်လေယာဉ်သည်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်း (သြစတေးလျ) မှ 'Shaka Rock' အမည်ရှိ ...
Public Image Limited သည်စင်မြင့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်
အဆိုတော်ဂျွန်လိုင်ဒွန် (Sex Pistols နှင့်သူ၏အချိန်၌ Johnny Rotten) ၏လက်မှ Public Image Limited ...
Echo နှင့် Bunnymen ကီးဘုတ်သမားဟောင်းတို့မတော်တဆမှုဖြင့်သေဆုံးသည်
၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အာရုံခံစားမှုရစေသောတီးဝိုင်းများအနက်မှ၎င်း၏ keyboardist ဖြစ်သောဂီတပညာရှင် Jake ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Calle 13 သည်အံ့သြဖွယ်များဖြင့်ပြန်လာသည်
Calle 13 ကငါတို့ကိုအံ့သြဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ၊ သူတို့နှစ်ယောက်က ၂၀၁၀ အတွက်အလုပ်သစ်တစ်ခုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောတယ်။
The Killers နှင့် Wolfmother တို့အတူတကွရှိသည်
The Killers with Wolfmother: အဖွဲ့များသည်ဖျော်ဖြေရေးခရီးအတူသွားခဲ့ပြီးမနေ့ညက Molson သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖွင့်ရန်အတူတကွတက်ခဲ့ကြသည်။
Scissor Sisters: 2010 တွင် album အသစ်
The Scissor Sister သည်နှောင့်နှေးနေသည်။ New York အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏အလုပ်သစ်များကိုမတ်လ၌သာရောင်းချလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Green Day ကိုစပိန်မှာရောင်းကုန်သွားပြီ
Green Day ရောင်းကုန်သွားပြီ။ မြောက်အမေရိကတေးဂီတအဖွဲ့သည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ် '၂၁ ရာစုပြိုကွဲခြင်း' ကိုစပိန်၌တင်ဆက်။ ပိုစတာကိုဆွဲထားသည်။
Jonas Brothers, "အမှန်အတိုင်းထားပါ"
Jonas Brothers ၏ဗွီဒီယိုအသစ် - ညီအစ်ကိုများသည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော“ Keep It Real” ၏အပိုင်းကိုတင်ပြသည်။
Kings Of Leon၊ DVD အသစ်နှင့် remix disc တို့ပါ ၀ င်သည်
Keith Richards နှင့် Jack White တို့သည်သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုအတူတကွမှတ်တမ်းတင်သည်
Rolling Stones အယ်လ်ဘမ်သစ်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောထုတ်လုပ်သူအဖြစ် Jack White ကိုညွှန်ပြသောကောလာဟလများအလယ်၌ Keith ...
Black Eyed Peas: "ငါတို့အများကြီးအောင်မြင်ခဲ့လို့ကောင်းချီးခံစားရတယ်"
ဥရောပသည်“ မြို့သစ်၌အချစ်သစ်” ကိုတင်ဆက်သည်။
http://www.youtube.com/watch?v=vxdbnOAa_V4 Este es el nuevo video de los suecos Europe, que pertenece al tema «New Love in Town» y es…
Antigua Jazz Band ၏အနှစ် ၄၀၊ ကျောင်းဟောင်း၏အာဂျင်တီးနားဂျက်ဇ်ဂီတ
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနှောင်းပိုင်းနှစ် ၆၀ ကတည်းက Antigua Jazz Band (AJB) သည်ထိပ်တန်းသံစုံတီးဝိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Slayer ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်သည်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်စွဲဖြင့်ဖြစ်သည်
Slayer ၏အလွန်မျှော်မှန်းထားသောအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော World Painted Blood သည်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်။
Nirvana: '' Live At Reading '' ကိုထုတ်ဝေလိမ့်မည်
Nirvana ၏နောက်ထပ်ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုမှာဤနေရာတွင်ဖြန့်ချိမည့် CD နှင့် DVD သည် 'Live At Reading' ဖြစ်သည်။
Kaiser Chiefs: "ငါတို့ခွဲခွာမှာမဟုတ်ဘူး"
ဗြိတိသျှ 'အင်ဒီ' အဖွဲ့သည်ခွဲခွာခြင်းအကြောင်းပြောသောကောလာဟလများကိုငြင်းဆိုရန်ထပ်မံထွက်လာခဲ့သည်။ ပြီးတော့အဲဒါက ...
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Noel Gallagher သည်သူနှင့်ခွဲခွာခြင်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်လူအများပါးစပ်ကိုဖွင့်ထားခဲ့သည်။
The Dead Weather သည် Jimmy Kimmel တိုက်ရိုက်လွှင့်သည်
http://www.youtube.com/watch?v=0MDmw8cbSVc Aquí vemosalos The Dead Weather en vivo, en el programa de Tv de Jimmy Kimmel Live. La…
The Doors မှမဖြန့်ချိသေးသော Live footage ကိုဖြန့်ချိသည်
၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကိုတော်လှန်ပြီးသူ့ရဲ့အဆိုတော် Jim Morrison ကိုဒဏ္legendာရီဆန်ဆန်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဟာသတင်းမှာထပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း။ ဤအရာများအားလုံးနှင့်အခြားများစွာတို့ကတစ်ယောက်တည်းအော်ဟစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ Neorcan လူငယ်အနုပညာရှင် ...
“ နောက်ဆုံးအက” - Raveonettes မှသီချင်းအသစ်
In And Out Of Control, ဒိန်းမတ်လူမျိုး The Raveonettes ၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်သည်မကြာမီငါတို့နှင့်အတူရှိလိမ့်မည်။
Noel Gallagher သည် Oasis နှင့်သူ၏လမ်းခွဲမှုအကြောင်းပြောသည်
“ ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ၊ ဝမ်းနည်းပြီးငါ့နှလုံးသားမှာနာကျင်မှုများစွာနဲ့ဒီမနက်ငါမင်းဆီကိုစာရေးလိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ မှစ၍ ၂၈ ရက် ...
သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အတွက်အသုဘအခမ်းအနား "Wrench"
သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အတွက်နာရေးကူညီမှုအသင်းအတွက်ဗီဒီယိုသစ်
Tokio Hotel: "Automatic" ၏နောက်ကွယ်
http://www.youtube.com/watch?v=xZnYYT0bAzs Lo que aquí vemos es el detrás de escena de unos de los videos más esperados: se trata del…
Sonata Arctica၊ "Flag In The Ground" အတွက်ဗီဒီယို
http://www.youtube.com/watch?v=yX0xyo03raQ Otros metaleros finlandeses que vuelven al ruedo son Sonata Arctica, la banda metalera refinada que editará el mes que…
Oasis: Noel Gallagher သည်အဖွဲ့မှထွက်ခွာသွားသည်
Noel Gallagher သည် Oasis မှထွက်ခွာသွားပြီးအဖွဲ့သည်ဆက်လက်မနေနိုင်တော့ပါ။ ဂစ်တာသမားသည်သူ၏အနားယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
"This is Us": Backstreet Boys အသစ်၏အသေးစိတ်များ
Dave Lombardo သည် Slayer ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်အကြောင်းပြောသည်
လတ်တလော metal scene တွင်အကောင်းဆုံးတီးဝိုင်းများထဲမှဒရမ်တီးသူအားမကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
"ငါ့နှလုံးသားမှတဆင့်ဖြောင့်သည်"၊ Backstreet Boys ဗီဒီယိုသစ်
http://www.youtube.com/watch?v=xcW4HL5_7nk Traemos hoy el reciente video de los Backstreet Boys, que acaba de aparecer. Se trata del tema «Straight Through…
အနည်းဆုံးတော့ Liam Gallagher ၏ခယ်မဖြစ်သူ Natalie Appleton ကကြေငြာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ...
"အက်တမ်ကိုပိုင်းခြားခြင်း": ကြီးမားသောတိုက်ခိုက်မှု EP
Elbow အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ The Radio On TV နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကြီးမားသောတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Arctic Monkeys: Humbug သည်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရောင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအာတိတ်မျောက်များရောင်းအား၌ကျော်ကြားမှုသည် Humbug ကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။
Snow Patrol: "ငါတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကလူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်"
တကယ်ပါပဲ။ တစ်ချိန်က Dolores O'Riordan ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့သည်တွေ့ဆုံရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
“ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလက်စားချေခြင်း”၊ REM ဗီဒီယိုသစ်
"Supersonic": Pearl Jam မှသီချင်းအသစ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအဘိုးအိုမှရိုက်ကူးခဲ့သော "fixer" သီချင်းဗီဒီယိုကိုငါတို့ပြသည်။
သူတို့ကိုကောက်သောလင်းတများ:“ Caligulove” (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်)
"သေဆုံးသူငယ်ချင်းများ"၊ "ဆင်များ" နှင့်ကွန်ယက်ကို ၀ င်ရောက်နေသောအခြားသူများ၏ဗွီဒီယိုများကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ယခုတင်ပြသည်။
ဤဗြိတိသျှအဖွဲ့၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ကြေငြာချက်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Keane သည် Oasis နှင့်အလုပ်လုပ်လိုသည်
Tom Chaplin ဦး ဆောင်သောတေးဂီတအဖွဲ့သည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သောတရားစွဲဆိုမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။
အဖွဲ့မှာပျော်ပျော်နေခဲ့တဲ့ငါတို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုရှက်စရာကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ Rascals ကငါတို့ကိုခွဲခွာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ခွဲခွာခြင်းကိုကြေငြာခဲ့တယ်။
အောက်တိုဘာလအတွက် Weezer ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ် Raditude
အဆိုတော်နှင့်ဂစ်တာသမား Rivers Cuomo ဦး ဆောင်သော Los Angeles တီးဝိုင်းသည်မရပ်ဘဲအသစ်များကိုဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကငါတို့ Hanson ပြန်လာမယ်လို့ကြေညာပြီးအခုညီအစ်ကိုတွေကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီ။ အယ်လ်ဘမ်သစ်ပြီးသွားပါပြီ ...
"ငါတို့နောက်လိုက်ဖို့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး"၊ Bon Jovi သည်စက်ဝိုင်းမှပြန်လာသည်
မင်းမှန်တယ်။ Bon Jovi ပြန်လာသည်နှင့်ဤဂီတအပိုင်းသစ်အတွက်သူသည် John Shanks နှင့်တစ်ဖန် ...
"Concorde": Amaral မှအသစ်သောအရာကိုအစမ်းကြည့်ပါ
တကယ်ပါပဲ။ လာမယ့်စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ဟာဈေးကွက်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ...
Rammstein: သီချင်း ၁၁ ပုဒ်နှင့်အယ်လ်ဘမ်အသစ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း Metal Hammer ၌ထည့်သွင်းမည့်သီချင်း ၁၁ ပုဒ်ကိုကြားနိုင်လောက်အောင်ကံကောင်းခဲ့သည်။
Pearl Jam: The Fixer အတွက် "လျှို့ဝှက်ချက်" ဗီဒီယို
မေလအကုန်တွင် Eddie Vedder ဦး ဆောင်သောတီးဝိုင်းသည်တိတ်တဆိတ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
"Sink or Swim": Bad Lieutenant သို့ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှု
Peter Hook မပါဘဲ New Order project အသစ် Bad Lieutenant အကြောင်းငါတို့ပြောပြီးပြီ။
သူတို့ကိုကောက်ထားသောလင်းတများ:“ Dead End Friends” (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်)
Josh, Dave နှင့် John Paul တို့သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကနေရာအချို့နှင့်ပွဲလမ်းသဘင်များတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးထွက်ခွာရန်စတင်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ်ထုတ်ဝေမှု ၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နှင့်အတူ U25 ကမကြာမီဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
The Rolling Stones မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဆင်ဆာဖြတ်သည်
သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးရော့ခ်တီးဝိုင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော Rolling Stones ၏လျှို့ဝှက်ချက်များသည် ...
REM အမည်ရှိတီးဝိုင်းကြီးမှတစ်ခုခုလွဲမှားလျှင်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့အောက်တိုဘာလမှာ ...
ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Humbug ဟာ James English နဲ့ Josh Homme တို့ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တတိယအင်္ဂလိပ်အယ်လ်ဘမ် ...
The Beatles သည်မှတ်တမ်းမတင်ရသေးသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် BBC မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
The Fabulous4သည်ဂီတသမိုင်းတွင်သူတို့၏အမှတ်အသားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထို့ကြောင့်တွေ့ရှိမှုတိုင်းကို ...
Tokio ဟိုတယ်၊ "အလိုအလျောက်"၊ သီချင်းအသစ်
http://www.youtube.com/watch?v=x0qBzzT7MGE Tokio Hotel está de vuelta y ya podemos escuchar un fragmento de una nueva canción llamada «Automatic«. Se trata…
Amaral သည် La Barrera del Silencio ကိုထုတ်ဝေသည်။
Amaral သည်စက်တင်ဘာလတွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိသော်လည်းတိုက်ရိုက်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 'The Sound Barrier' ဖြစ်သည်။
Chickenfoot၊ "Soap On A Rope" မှအပိုင်း
Chickenfoot မှ“ Soap On A Rope” သည်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအဖွဲ့၏ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ်မှဒုတိယမြောက်သီချင်းဖြစ်သည်။
Plasticine Mosh, "မတရားသဖြင့်ပေါ့ပ်သီချင်း"
Plastilina Mosh ၏ဗီဒီယိုအပိုင်းသစ်၊ သီချင်းသည် "မတရားသဖြင့်ပေါ့ပ်သီချင်း" ဖြစ်ပြီး 'All U Need' အယ်လ်ဘမ်တွင်ပါဝင်သည်။
La Quinta Estaciónသည်စပိန်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ မက္ကဆီကိုအခြေစိုက်တီးဝိုင်းသည်ဆောင်း ဦး ရာသီဖျော်ဖြေရေးရက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
The Ting Things သည်အမေရိကန်ကိုလည်ပတ်သည်
The Ting Tings US Journey ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်ဗြိတိသျှ The Ting Tings အားအမေရိကန်ကို ဖြတ်၍ သူတို့၏ခရီးတွင်ပြသသည်။
"ဒါတွေကငါ့လိမ်စကားတွေ" ဟုခေါ်သောသရုပ်ပေါ်လွင်သော Radiohead သီချင်းအသစ်သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်သို့ထူးဆန်းစွာ ၀ င်ရောက်လာသည်။
"အဆုံး": Pearl Jam မှသီချင်းအသစ်
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Pearl Jam အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို Backspacer လို့ခေါ်လိမ့်မယ်။
Crooked Vultures များသည်သူတို့၏ပစ္စည်းကိုအစမ်းကြည့်ကြသည်
ငါတို့ပြောပြီးသားအတိုင်း John Paul Jones (Led Zeppelin), Dave Grohl (Foo Fighters) နှင့် Josh Homme (ကျောက်ခေတ်ဘုရင်မ)
Sidonie က The Fire ကိုရှင်းပြသည်။
Sidonie ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်သည်လာမည့်သြဂုတ် ၁၈ တွင် 'El fuego' (Sony BMG, 18) ကိုဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
အောက်တိုဘာလတွင် Wolfmother မှအသစ်ဖြစ်သော 'Cosmic Egg'
Rockers Wolfmother သည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်အသစ် 'Cosmic Egg' ကိုအောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ…
ယခုထွက်ရှိလာသောအဆိုတော်နှင့်ဂစ်တာသမားJoaquín Levinton (ex Turf) ၏တီးဝိုင်းဖြစ်သော Argentine Sponsors ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုသည် ...
The Verve: တတိယအကြိမ်ခွဲခွာခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကနာမည်ကြီးဂီတသံတစ်ခုတွင်ပေါ်ထွက်လာသောအချက်အလက်များအရအင်္ဂလိပ်အဖွဲ့ The Verve ...
မန်ချက်စတာကနေဒီသုံးယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်…ငါတို့ Jez ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်…
Bon Jovi သည်သူ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုအစမ်းကြည့်သည်
Bon Jovi ပြန်လာပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ Jon ဦး ဆောင်တဲ့ New Jersey တီးဝိုင်းကသူတို့ရဲ့နောက်အလုပ်အတွက်ရက်ချိန်းပေးထားတယ်။
Green Day မှ American Idiot သည်ပြဇာတ်ရုံသို့
ဝေဖန်သူများသည် American Idiot ကို punk-rock အော်ပရာအဖြစ်ယူရန်နောက်ဆုံးတွင်တီးဝိုင်းဖြစ်သော ...
My Chemical Romance သည်အောက်တိုဘာလတွင်အယ်လ်ဘမ်အသစ်ရှိလိမ့်မည်
တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိသော်လည်းဤအပတ်များတွင် emo punk ၏စံသတ်မှတ်ချက်များကိုပြောကြသည်။
ဂစ်တာသူရဲကောင်း: Van Halen
Guitar Hero အသစ် Van Halen အတွက်တရားဝင်နောက်တွဲကားသည်ဤဒဏ္ာရီလာဒဏ္bandာရီဆန်ဆန်တီးဝိုင်းအားရည်စူးသည်။
Backstreet Boys: 'This Is Us' ပရိုမိုးရှင်းကလစ်
လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ Backstreet Boys အယ်လ်ဘမ်အသစ် 'This Is Us' ကိုဖြန့်ချိပြီး ...
Ozzy Osbourne သည်ဂစ်တာသမားကိုပြောင်းသည်
သတ္တုဘုရင်၏ Ozzy Osbourne သည် Zack Wylde မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဂစ်တာသမားအသစ်တစ်ယောက်ရှိသည်။
[dailymotion] http://www.dailymotion.com/video/xa2jk0_the-prodigy-take-me-to-the-hospital_music [/dailymotion] The Prodigy ၏ပရိသတ်များ၊ ဤတွင်ဗြိတိန်မှဗီဒီယိုအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "ငါ့ကိုယူပါ ... " ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍
သူတို့ကို Crooked Vultures: အသစ်သော supergroup တစ်ခုလား။
John Paul Jones (Led Zeppelin), Dave Grohl (Foo Fighters) နှင့် Josh Homme (Queens of the Stone Age) တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။
Sugababes: ဗီဒီယိုနှင့် Flu A
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Sugababes ၏ဗွီဒီယိုအသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်၊ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်သီချင်းအသစ်“ Get Sexy” ဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့် ...
The Hives သည် BAM 09 ပွဲတော်အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်
၁၇ ကြိမ်မြောက် BAM (Barcelona Acción Musical) ဂီတပွဲတော်သည်မြို့၌တီးခတ်မည့်တီးဝိုင်းအဖွဲ့များကို စုစည်း၍ ...
The Fountain: Echo And The Bunnymen မှအသစ်
The Fountain သည်ဤနာမည်ကြီးဗြိတိသျှတေးဂီတအဖွဲ့၏ဆယ်ခုမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်တော့ဖြန့်မလဲ။ လာမည့်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ...
The Young Veins: The Disco At Panic အုပ်စုဟောင်း
သင်မှတ်မိသည့်အတိုင်း Ryan Ross နှင့် Jon Walker တို့သည်မကြာသေးမီက Panic At ၏အခြားအဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး နှင့်လမ်းခွဲခဲ့သည်။
http://www.youtube.com/watch?v=kjsed093FDA Nuevo video recién estrenado de los Arctic Monkeys: se trata de «Crying Lightning«, tema incluido en su nuevo disco…
Backstreet Boys မှအသစ်သော "ငါ့နှလုံးသားမှတဆင့်ဖြောင့်သည်"
http://www.youtube.com/watch?v=PP30gwR51fM Ya podemos escuchar lo nuevo de los Backstreet Boys, que vuelven con el tema «Straight Through My Heart«, primer…
Depeche Mode သည်ဘရာဇီးရှိသူတို့၏ဖျော်ဖြေပွဲများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
Tokio Hotel မှအယ်လ်ဘမ်အသစ် "Humanoid"
ငါတို့ဂျာမန်လူမျိုး Tokio Hotel ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်သတင်းကိုငါတို့ယူတယ်၊ သူတို့တီးဝိုင်းကသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြန့်မယ်ဆိုတာသိလာတယ်။
"ကောင်းသောညပါ၊ ခရီးကောင်း" ... The Killers: အငြင်းပွားဖွယ်ဗီဒီယိုတစ်ခု၏တေးသံ
Las Vegas Quartet သည် UNICEF, MTV Exit နှင့် US AID တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ clip တစ်ခုဖန်တီးရန်ညွှန်ကြားသည်။
၆၉ မျက်လုံး၊ Dead Girls Are Easy အတွက်ဗီဒီယို
http://www.youtube.com/watch?v=Y1AEC5hQVMc Los finlandeses The 69 Eyes acaban de presentar su nuevo video, que pertenece al tema «Dead Girls Are Easy»….
Pearl Jam အယ်လ်ဘမ်သစ်၏သီချင်းစာရင်း
Pearl Jam အယ်လ်ဘမ်အသစ်အကြောင်းသတင်းများ၊ မျှော်မှန်းတဲ့အလုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းစာရင်းကိုငါတို့သိပြီးပြီ။
Rammstein မှအသစ်ဖြစ်သော "Liebe ist fur alle da"
http://www.youtube.com/watch?v=u_IUuZsVd8k Novedades sobre Rammstein: los alemanes tienen listo un nuevo disco, y ya podemos escuchar el primer single, llamado «Liebe…
Maroon5သည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက်လုပ်ဆောင်နေသည်
Maroon5ပရိတ်သတ်များအတွက်သတင်းကောင်း - အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Coldplay: "Strawberry Swing" ၏အစမ်းကြည့်ရှုမှု
http://www.youtube.com/watch?v=fraonE2XLqU Este que vemos es un pequeño adelanto del clip de «Strawberry Swing«, nuevo single de Coldplay que se estrenará…
Pearl Jam သည်စက်တင်ဘာလတွင်အယ်လ်ဘမ်သစ်ထွက်လိမ့်မည်
၉၀ ခုနှစ်များက grunge အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သော Pearl Jam သည်အလွန်ကျန်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ…
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ကြီးကျယ်သောပေါ့ပ်အဖွဲ့များမှအဖွဲ့ ၀ င်များသည်ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံကြလိမ့်မည်။
Duran Duran သည် ၈၀ ခုနှစ်များ၏အသံကိုယူသည်
Duran Duran ပြန်လာသည်နှင့်စိတ်ကူးသည် ၈၀ ခုနှစ်အုပ်စု၏ထူးခြားသောအသံသို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။
The Disco တွင်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ "အားလုံးကောင်းပြီ၊ ငါတို့ရှေ့ဆက်မယ်"
Panic At The Disco, Brendon နှင့် Spencer တို့၏ကျန်ရှိနေသေးသောအဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လူသိများလာသည်နှင့်အမျှ Amaral သည်သူ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်သော Gato Negro Dragon Rojo ကိုဆက်ခံမည့်သူဖြစ်သည်။
Megadeth မှအသစ် "Headcrusher"
နောက်ဆုံးတော့ Megadeth ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Endgame လို့ခေါ်တဲ့စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာငါတို့ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။
Paul Stanley (Kiss) -“ ငါတို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပြီးသွားပြီ”
ဂန္ထဝင်တေးဂီတအဆိုတော် Kiss ၏ဂစ်တာသမား၊ တေးသံရှင်သည်သူပြောသောတရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြေငြာချက်တစ်ခုတင်ခဲ့သည်။
Sidonie မှအသစ်ဖြစ်သော "The Fire"
http://www.youtube.com/watch?v=l0Efz-TqtQ0 Nuevo videoclip de Sidonie, que pertenece al tema «El incendio«, primer single de su nuevo álbum que llevará el…
The Fabulous Cadillacs သည်အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုပြင်ဆင်သည်
Los Fabulosos Cadillcas သည်ပရိသတ်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်ခဲ့သောယမန်နှစ် comeback ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးတွင်ပြန်လာခဲ့သည်။ အခုတော့အာဂျင်တီးနား ...
Disco ရှိ Panic သည်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး ကိုဆုံးရှုံးသည်
သူတို့ရဲ့ ၀ က်ဆိုက်မှာတရားဝင်ကြေငြာထားတဲ့ကြေညာချက်မှာ Ryan Ross နဲ့ Jon Walker နှစ် ဦး စလုံးဟာ ...
Arctic Monkyes: "Crying Lightning"၊ အပြင်အဆင်အသစ်
သူတို့ရဲ့စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ဗြိတိန်အာတိတ် Monkyes“ Crying Lightning” သီချင်းအသစ်ကိုငါတို့နားဆင်နိုင်နေပြီ။
Foo Fighters မှအသစ်ဖြစ်သော "Wheels"
http://www.youtube.com/watch?v=-Jm9k5Fe1uM Este video muestra una canción de Foo Fighters, que la banda estrenó en un concierto brindado en la Casa…
Children of Bodom၊ အဖုံးအခွေ
The Finns are back of Bodom Children: metal တီးဝိုင်းသည်သူတို့၏နောက်ဆုံးလက်ရာကိုစက်တင်ဘာလလယ်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
“ နောက်ထပ်မျက်ရည်မငိုနဲ့” - မကောင်းသောဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး၏ပွဲ ဦး ထွက်
New Order မှဤအစားထိုးပရောဂျက်နောက်ကွယ်မှလူ Bernard Sumner သည်ပထမအယ်လ်ဘမ်၏အသေးစိတ်အချို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Cutie အတွက် Death Cab ၏ Death Cab ၏အပိုင်းသစ် "Little Brives"
ငါတို့မြင်ရသောအရာသည် Cutie for the American Death Cab for the American Death Cab မှသီချင်းအသစ်ဖြစ်သော“ Little Brives” အတွက်ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Chemical Romance၊ ထောင့်တစ်ဝိုက်
My Chemical Romance ပြန်ရောက်ပါပြီ။ အမေရိကန်အဖွဲ့သည်၎င်း၏နောက်စီဒီ၊ ဆက်ခံသူအားအပြီးသတ်တော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Outloud ကို "We Run" ဖြင့်စမ်းသပ်သည်။
ဒါက Hardl ဂီတအဖွဲ့အသစ် Outloud မှပထမဆုံးဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ်ကိုနှစ်ကုန်မှာဖြန့်ချိမယ့် ...
"ကမ္ဘာ့ဆေးသုတ်ထားသောသွေး": Slayer အယ်လ်ဘမ်အသစ်
Slayer၊ ကယ်လီဖိုးနီယားခရိုင်တစ်ခုတွင်သူတို့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကဆယ်စုနှစ် ၃ ခုနီးပါးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောထိုသံမဏိစစ်ပြန်များသည် ...
ယနေ့သည်စောင့်မျှော်ခဲ့ဖူးသော 'U2 360º' ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့သည်
ဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးမှာအကြီးဆုံးအားကစားကွင်းဖြစ်တဲ့ Camp Nou မှာပရိသတ် ၉၀၀၀၀ ကျော်ယနေ့ညစုရုံးကြမယ်။
Slipknot သည် ၂၀၁၀ အတွက်အယ်လ်ဘမ်သစ်ရှိလိမ့်မည်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဥရောပအရေးအပါဆုံးပွဲတော်များဖြစ်သော Sonisphere ၏အစနှင့်အလယ်၌ ...
Supergrass သည်သူတို့၏ idols များကိုဖုံးကွယ်ရန်အတူတကွစုဝေးကြသည်
အကြိမ်များစွာတိုက်ဆိုင်မှုများမှကြီးကျယ်သောအရာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒါကတီးဝိုင်းအသစ် Hot Rats နဲ့တူပုံရတယ်။
စက်တင်ဘာလအတွက် Living Colour မှအသစ်ဖြစ်သော Doorway in the Chair
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ Collideøscopeကိုထုတ်ဝေသောနှစ်တွင် Living Color အကြောင်းသိပ်မသိကြပါ။ မကြာသေးမီက New York အဖွဲ့မှ ...
La Mancha de Rolando တွင် "မိုးခေါင်" ကိုကြည့်ပါ
ဒါကအာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ La Mancha de Rolando ရဲ့ဇူလိုင်လမှာသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်သစ်ဖြန့်ချိမယ့်အပိုင်းသစ်ပါ။
Alice in Chains သည်သူမ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုအစမ်းကြည့်သည်
Chain in Alice - A Looking In View (Trailer) ဤသေးငယ်သော preview သည်“ A Looking In View”၊ ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
"Brand New Eyes": Paramore ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်
"We Are The Fallen" သည် Evanescence ၏ပြာမှုန်မှတက်လာသည်
Evanescence ကိုတည်ထောင်သူအဆိုတော် Amy Lee (၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့မှထွက်ခွာသွားသူ) Ben Moody ကပြောကြားခဲ့သည်။
မနေ့က Korn သည်တိုတောင်းသော်လည်းပြင်းထန်သောဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင်ဘာစီလိုနာရှိ Razzmatazz ၌ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ မျိုးရိုးသည်အဖွင့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
Wilson ညီအစ်မများ ဦးဆောင်သော ဤဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် အမေရိကန်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏နောက်ထပ် စံချိန်တင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အစီအစဉ်များကို အပြီးသတ်နေပါသည်။ နန်စီ ဝီလ်ဆင်၊...
Pet Shop Boys အဖုံး "Viva la Vida"
ဗြိတိန်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အရောင်းဆိုင်ကလေးများသည် Coldplay သီချင်း Viva La Vida ၏သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသီဆိုရန်အားပေးခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် Liverpool မှ quintet တစ်ခုဖြစ်သော FGTH ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေသောအခြားအင်္ဂလိပ်အုပ်စု ...
Green Day ၏အပိုင်းသစ် "၂၁ သေနတ်"
[dailymotion] http://www.dailymotion.com/video/x9nh3i_green-day-21-guns_music [/dailymotion] Green Day အတွက်ဗီဒီယိုအသစ်-သီချင်းသည် "21 Guns" ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသောဒုတိယမြောက်သီချင်းဖြစ်သည်။ .။
Miranda သည် "Mentía" ကိုတင်ဆက်သည်။
အာဂျင်တီးနားလူမျိုး Miranda သူသည်လာမည့်လတွင်ဖြန့်မည့် 'Es Imposible' အမည်ရှိအယ်လ်ဘမ်အသစ်ရှိသည်။
Yoko Ono ၏ The Beatles to Tribute အယ်လ်ဘမ်
ရော့ခ်သမိုင်းတွင်အရေးပါဆုံးနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောတီးဝိုင်းများကိုဖျက်သိမ်းပြီးအနှစ် ၄၀ အကြာ ...
Metalway ပွဲတော်၊ Zaragoza တွင်သတ္တုအစည်းအဝေး
The Donnas သည်သူတို့၏ပထမဆုံးစုစည်းမှုအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Greatest Hits Vol.16 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
ပိုမိုတိကျစေရန်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်တစ်လအောက်၌ punk-pop တီးဝိုင်း The Donna သည် ...
Megadeth သည်သူ၏ studio studio album အသစ်ဖြစ်သော Endgame ကိုကြေငြာခဲ့သည်
နောက်ဆုံးတွင် Colorado တီးဝိုင်း Dave Mustaine, Megadeth ၏အလုပ်သစ်ဖြစ်မည့်အရာကိုအချက်အလက်များတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါတွေ…
Café Tacvba နှင့်၎င်း၏အနှစ် ၂၀ သက်တမ်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသူ၏“ ၂၀ နှစ် ၂၀ မြို့များ” ၏ခရီးစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ...
သူတို့အားလုံးပြန်လာကြပြီးဘယ်သူမှမပျောက်ကွယ်သွားဘူး။ အခုကသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြန့်ဖို့နဲ့ Hanson ညီအစ်ကိုတွေပဲ။
အယ်လ်ဘမ်သစ်နှင့်အတူ Los Planetas
စပိန်အင်ဒီဂန္တဝင် Los Planetas သည်၎င်းတို့၏စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုနောက်ဆုံးရောင်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
၎င်းကိုအင်္ဂလိပ် punk တွင် ရှောင်လွှဲ၍ မရသည့်အက်ဆေးကိုစပိန်၊ အင်္ဂလန်၏အိပ်မက်များနှင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
Manic Street Preachers အယ်လ်ဘမ်အသစ်သည်လာမည်
Wales မှတီးဝိုင်းသည်အယ်လ်ဘမ်သစ်ဖြန့်ချိရန်အသေးစိတ်အားလုံးကိုပြင်ဆင်နေသည်၊ ဂျာနယ် For ...
ဓာတ်ပုံပြပွဲတွင်မထုတ်ဝေရသေးသော John Lennon နှင့် Yoko Ono
၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ Montreal မြို့လယ်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ထိုအချိန်ကနာမည်အကြီးဆုံးဂီတစုံတွဲသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့သော့ခတ်ထားခဲ့သည်။
"Momento" အတွက်ဗီဒီယို Los Cafres
Los Cafres သည်အရေးအပါဆုံးအာဂျင်တီးနားရက်ဂေးတေးဂီတအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဤတွင်ငါတို့မြင်ရသောအရာသည်သူတို့၏နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုဖြစ်သော "Momento", ...
Limp Bizkit သည်ပေါက်ကွဲစေသောအယ်လ်ဘမ်သစ်တစ်ခုပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်
Limp Bizkit သည်သူပြန်လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အမေရိကန်များသည်သူတို့၏အသံသွင်းရန်စတူဒီယိုထဲသို့ ၀ င်တော့မည်။
New Order အဖွဲ့ဝင်များသည် Bad Lieutenant: အဖွဲ့အသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းသည်
Linkin Park: Transformers အတွက် "New Divide"
Linkin Park -“ New Divide” မကြာသေးမီက Transformers 2: Revenge of the Fall“ ကဲဒီမှာငါတို့ကလစ်ကိုယူလာ ...
The Black Crowes: စက်တင်ဘာလတွင်အယ်လ်ဘမ်နှစ်ခုရှိသည်
Los Cuervos Negros သည်ဂန္ထဝင်ရော့ခ်ပရိသတ်များနှစ်သက်စေသောအခြားရော့ခ်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။
Sonic Youth သည် "Sacred Trickster" နှင့်နေထိုင်သည်။
http://www.youtube.com/watch?v=YGJ6oWN_nrQ Más de Sonic Youth en la televisión estadounidense: ahora, los veteranos alternativos se presentaron en el programa de David…
အစိမ်းရောင်နေ့နှင့် "၂၁ ရာစုပြိုကွဲခြင်း"
အစိမ်းရောင်နေ့ - မေ ၂၁ ရက်မေလတွင် Green Day ကို New York ရှိ Webster Hall ၌အထူးတင်ဆက်ခဲ့သည်။
Blink 182၊ "ငါ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ "
http://www.youtube.com/watch?v=4ipR3h2Y99I Este video perteneceauna actuación que hicieron los Blink 182 hace un par de noches en el programa…
Johnny Marr သည် Smiths ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောသည်
လူသိများသောဒစ်ဂျစ်တယ်ကြားခံတစ်ခုအတွက်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Smiths ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ဂစ်တာသမားဟောင်း Johnny Marr သည် ...
အတားအဆီးများက 'ကမ္ဘာမြေသည်နားပင်းသည်' ဟုမှတ်တမ်းတင်သည်။
နာမည်ကြီး Barricada ပြန်ရောက်ပါပြီ။ Pamplona မှအဖွဲ့သည် Finland ၌သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်အားအပြီးသတ်ထိခိုက်ပေးသည်။
Pearl Jam မှသီချင်းအသစ် "Get some"
http://www.youtube.com/watch?v=48V_aD7qO78 Nuevo tema de Pearl Jam, que se incluirá en su próximo dico de estudio: los de Seattle presentaron ayer…
ပထမဆုံးသီချင်းခွေဖြစ်သော“ Last Look At Eden” သီချင်းမှဆွီဒင်ဥရောပ၏ဗီဒီယိုသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားပြီးသားဖြစ်သည်။
Muse ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနှစ်ခုကိုစပိန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းသည်လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၂၇ တွင်ဖျော်ဖြေမည်။
Cocktail ဖိနပ်တစ်ရံ၊ rockn´roll နှင့်အတူ Oslo မှ
နော်ဝေအဖွဲ့ The Cocktail Slippers ၏အလုပ်သစ်သည်ဆက်လက်ရိုက်ခက်နေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ Facebook profile ကမကြာခင်ကျော်သွားလိမ့်မယ် ...
Arctic Monkeys: အယ်လ်ဘမ်သစ်၏အသေးစိတ်များ
ဗြိတိသျှအာတိတ်မျောက်များသည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက်ပါ ၀ င်မည့်သီချင်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ တုန်း…
The Breakte The Concrete ဟူသောအယ်လ်ဘမ်အသစ်သည် The Pretenders
ယနေ့အင်္ဂါနေ့တွင် The Pretenders ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်သော Break Up The Concrete ဟုခေါ်သော ...
“ မိုးရွာ” သည်ကြံရာပါများ၏ဝင်စားမှုကိုတိုးတက်စေသည်
မင်းမှန်တယ်။ MaríaMonsonísနှင့် Teo Cardalda တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Galician ဂီတတူရိယာCómplicesသည်တေးဂီတကိုစတင်ပြသတော့မည်။
Barón Rojo သည် En En Clave de Rock စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
The Baron ပြန်ရောက်ပါပြီ။
Depeche Mode သည် Tour Of The Universe ကိုပြန်လည်စတင်သည်
David Gahan တစ်ယောက်ဆန့်ကျင်သောတိုက်ပွဲများကြောင့်ဖျော်ဖြေပွဲများကိုဖျက်သိမ်းရန်ဖိအားပေးခံရပြီးနောက် ...
ရေတံခွန်သည် "Dancefloor ကိုရှောင်ဖယ်" ပြသည်။
ဂျာမန်အကအဖွဲ့ Cascada သည်၎င်းတို့၏သီချင်းခွေမှ "Evacuate The Dancefloor" သီချင်းအတွက်ဤဗီဒီယိုကိုမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်။
World Fashion Tour (WFT) သည်ဖက်ရှင်ကျကျအရသာကောင်းကောင်းခံစားတတ်သောလှပသောသူများကိုလှုံ့ဆော်သည်။
Black Eyed Peas ဗီဒီယိုအသစ် Boom Boom Pow
သူတို့ရဲ့ END အယ်လ်ဘမ်သစ် The END ဖြန့်ချိမှုကဖန်တီးထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြားမှာ Black Eyed Peas ...
Kasabian၊ "Fire" အပိုင်း
http://vimeo.com/4358890 Este es el último video de Kasabian, que pertenece al tema «Fire«, single de su nuevo disco ‘West Ryder…
Incubus မှထုတ်လွှင့်သော Black Heart Inertia ၏ Videoclip
Monuments and Melodies များနှင့်အတူ Incubus သည်မကြာမီအခွေဆိုင်အားလုံးတွင်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးဟစ်မှုများရှိလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီကတီးဝိုင်းသည် ...
Porcupine Tree ကိုစပိန်မှာနိုဝင်ဘာလမှာတင်ဆက်လိမ့်မယ်
တိုးတက်သောရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ Porcupine Tree သည်သူတို့၏လာမည့်ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စပိန်သို့သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး Steven Wilson ...
Echo & The Bunnymen တို့သည်အာကာသထဲတွင်အသံမြည်လိမ့်မည်
ဤထူးခြားသောဗြိတိသျှ 'post-punk' တီးဝိုင်းသည်သူတို့၏ဂီတကိုအာကာသထဲတွင်ကြားရလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့ ...
Blur သည်ယခုနွေရာသီတွင်ဥရောပ၌၎င်းတို့၏ comeback tour နှင့်တစ်ထပ်တည်းကျသောစုစည်းမှုတစ်ခုကိုဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဒါဟာအကြောင်းတစ်ခု ...
The Libertines: အံ့အားသင့်စရာစွမ်းဆောင်ရည်
The Libertines သည်အံ့သြဖွယ်နည်းဖြင့်ပြန်လာပြီးဤဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည့်အတိုင်းတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင်…
Edguy သည်သူ၏ DVD အသစ်မှ "Save Me" ကိုတင်ဆက်သည်
၎င်းသည်ဂျာမန်လူမျိုး Edguy မှတိုက်ရိုက်အယ်လ်ဘမ်သစ်မှ“ Save Me” အတွက်တရားဝင်ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။
တုပ်ကွေးကြောက်တဲ့အတွက် Jonas Brothers ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်
ဤအမေရိကန်ပေါ့ပ်ဂီတသုံးမျိုးသည်မက္ကစီကို Monterrey မြို့၌သဘက်ခါ၌၎င်း၏တင်ဆက်မှုကိုစီစဉ်ထားသည်။
"မင်းငါ့ကိုလာတွေ့တာလား။ " Pet Pet Boys ၏ clip အသစ်
"မင်းငါ့ကိုလာတွေ့တာလား။ " Pet Shop Boys အယ်လ်ဘမ်အသစ်မှဒုတိယမြောက်သီချင်းသည် 'Yes' နှင့် ...
Jonas Brothers သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုငြီးငွေ့သည်
ဆင်းရဲသော Jonas Brothers တို့သည်အလွန်ခက်ခဲသောဘ ၀ ကို ဦး တည်သည် ... ညီအစ်ကိုများ Kevin, Joe နှင့် Nick Jonas တို့သည် "ဖြတ်သွားချင်တယ်" ဟုပြောခဲ့သည်။
Paranoid သည်လွန်ခဲ့သောလကဖြန့်ချိပြီးနောက်သူတို့၏အကျော်ကြားဆုံးအယ်လ်ဘမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါ Black Sabbath အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြီးသတ်သည်။
Paul Rodgers သည် Queen နှင့်လမ်းခွဲခဲ့သည်
နာမည်ကြီးဂီတမဂ္ဂဇင်းအတွက်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်အဆိုတော် Paul Rodgers ကသူသည် Brian May နှင့်လမ်းခွဲခဲ့သည်။
Norwegian metalheads Kamelot မှဗွီဒီယိုအသစ်။
Fangoria၊ "The Little Ice Age" မှအပိုင်း
http://www.youtube.com/watch?v=Ze5LyDlrjUs Presentamos el nuevo videoclip de Fangoria, recién estrenado. El tema es «La pequeña edad de hielo«, segundo single de…
ဂရိနိုင်ငံရှိ Depeche Mode ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
ဂရိလူမျိုးများသည်တီးဝိုင်း၌ဖျော်ဖြေရန်ရှိသောကြောင့်မနေ့ကဗြိတိသျှ Depeche Moder ကိုမမြင်ရပါ။
The Killers: သံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အတူ 'A Dustland Fairytale'
http://www.youtube.com/watch?v=nNFs9bkD9jQ The Killers y un video especial. se trata de una actuación del grupo de Las Vegas en el programa…
Tokio ဟိုတယ်၊ AIDS ဆန့်ကျင်ရေးတီရှပ်များ
တိုကျိုဟိုတယ်၌မေ ၂၈ ရက်ကပြုလုပ်သောတီရှပ်များသည်အသိပညာပေးမှုကိုဖန်တီးသည်။
Wilco သည်မေလနှင့်ဇွန်လများတွင်စပိန်သို့ထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်သူ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုမိတ်ဆက်ရန် ...
Primal Fear၊ ခြောက်ကြိမ်သေ (၁၆.၆)
ငါတို့မကြာသေးမီကဖြန့်ချိသောနောက်ထပ်သတ္တုဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သီချင်းခြောက်ပုဒ်ဖြစ်သော German Primal Fear မှတ်တမ်းတင်ထားသောကလစ်ဖြစ်သည်။
"Paranoid": Jonas Brothers ၏သီချင်းအသစ်
ဒီအမေရိကန်ပေါ့ပ်ဂီတအဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာကိုစစ်ကြည့်တော့ရေဒီယိုပွဲ ဦး ထွက်အကြောင်းပြောနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။
Joe Satriani ထံမှဆိုင်းငံ့ထားသောတရားစွဲဆိုမှုနှင့် Cat Stevens ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်နေသောမျက်လုံးတို့ဖြင့် ...
Matt Sorum: "အရာအားလုံးမတူညီချင်ဘူး"
Guns 'n' Roses ဒရမ်သမားနှင့်ယခု Velvet Revolver တို့သည်တစ်ချိန်ကအကြောင်းကိုထပ်မံပြောခဲ့သည်။
Mantis ဆုတောင်းခြင်း၊ ဒီရေလှည့်ခြင်း
ဗြိတိသျှသတ္ထုဒဏ္gendsာရီ Praying Mantis ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုဖြန့်ချိမည့်ဗီဒီယိုအသစ် ...
The Prodigy မှ single သီချင်းအသစ် "Warrior's Dance"
The Prodigy သည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ် 'Invaders Must Die' တွင်ထည့်သွင်းထားသောဤ "Warrior's Dance" အယ်လ်ဘမ်သစ်ရှိသည်။
Green Day: MySpace မှတဆင့်ဖျော်ဖြေပွဲ
မင်းမှန်တယ်။ Billy Joe Armstrong ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့သည်မြို့၌အခမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Dream Theatre မှအသစ်သော "ခရီးလမ်းတစ်ကြောင်း"
၎င်းသည် Dream Theatre သည်၎င်း၏အသစ်မှထုတ်လွှင့်သောပထမဆုံးသီချင်း (အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်အသံဖိုင်) ဖြစ်သည်။
Khael သည် "ရှုခင်းများ" ကိုတင်ဆက်သည်။
Dani Pérez (Saratoga၊ Stravaganzza နှင့်ဒရမ်တီးသူဟောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောတီးဝိုင်း Khael) ၏ပထမဆုံး video clip ကိုငါတို့တွေ့ပြီးပြီ။
ဇွန်လတွင် Attaque 77 အယ်လ်ဘမ်သစ်ထွက်သည်
Attaque 77 သည်၎င်း၏ဇာတ်ခုံသစ်ကိုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားတီးဝိုင်းသည်၎င်းတို့၏စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုရောစပ်လိုက်သည်။
Sonic Youth သည် "ငါတို့သိသည်" ကိုတိုက်ရိုက်ပြသည်။
ဤဗွီဒီယိုသည် 'The Jools Holland Show' တီဗီရှိုးတွင်တိုက်ရိုက်တီးခတ်သော Sonic Youth ဖြစ်သည်။
Coldplay: plagiarism ဟုထပ်မံစွပ်စွဲခံရသည်
ငါတို့တွေဂစ်တာသမား Joe Satriani က Coldplay ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ခဲ့တာကိုမင်းမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လား။
Noel Gallagher သည် Oasis အတွင်း၌ခက်ခဲသောအချိန်များကိုကြေငြာသည်
သူ၏တောင်အမေရိကခရီးစဉ်အလယ်၌ဤအင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်းမှဂစ်တာသမားက 'ခက်ခဲသောအချိန်များ' ရောက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
REM သည်၎င်းတို့၏ဒုတိယအယ်လ်ဘမ် 'Reckoning' ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
REM သည်၎င်းတို့၏ ၂၈ နှစ်ပြည့်အနုပညာအလုပ်အားအထူးဖြန့်ချိမှုဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Clarínသတင်းစာ၌ Iron Maiden နှင့်အင်တာဗျူး
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၊ Velez Sarsfield အားကစားကွင်း၌မကစားမီသတ္ထုအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော Iron Maiden၊ ...
Sonorama 2009 အတွက်ဇယားကွက်ကိုစတင်စုဝေးစေခဲ့သည်
၎င်းတို့အားလုံးသည်ဥရောပ၌ကြီးကျယ်သောပွဲတော်များမဟုတ်ပါ။ ကျိုးနွံမှုအရှိဆုံးအခန်းလည်းရှိသည်။ ဒါက Sonorama ရဲ့ကိစ္စပါ ...
Gardel Awards 2009 အတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်း
Gardel Awards သည်အာဂျင်တီးနားဓာတ်ပြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဆုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်…
Ten ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေသောအခါ Pearl Jam နှင့်အင်တာဗျူး
grunge ဂီတ၏ရှေ့ဆောင်တီးဝိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Pearl Jam သည်သူတို့၏ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ် Ten ကိုအသစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ။
"ငါမင်းကိုသိစေချင်တယ်" Dinosaur Jr. မှသီချင်းအသစ်
ဤမြောက်အမေရိကန်တေးဂီတအဖွဲ့သည်သူတို့၏အလွန်မျှော်လင့်ထားသောအယ်လ်ဘမ်သစ်အားသူတို့၏သီချင်းတစ်ပုဒ်အားအခမဲ့ download လုပ်ခွင့်ပေးသည်။
Blink-182 သည် single သီချင်း၏ကောလာဟလများကိုငြင်းဆိုသည်
The Killers: "ငါတို့ Led Zeppelin နဲ့ Nirvana ကိုသူတို့ရဲ့ခြေတင်ခုံကနေခေါ်ထုတ်မယ်"
Las Vegas Quartet (အဆိုတော်များနှင့်မြောက်အမေရိကသို့ခရီးဖြင့်သွားသော) အဆိုတော် Brandon Flowers သည် ...
နောက်ပြန်၊ Wolfmother အသစ်၏ပထမဆုံးအစမ်း
သြစတေးလျလူမျိုး Wolfmother သည်၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်သုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး အားနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုဖြန့်ချိရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
The Beatles သည်သူတို့၏ discography တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိမ့်မည်
၎င်းသည်စီးပွားရေးအရကောင်းမွန်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပရိတ်သတ်များအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်ထုတ်ဝေမှု ...
နောက်ဆုံးတွင် MTV News မှသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည် - Paramore သည်သူတို့၏ဒုတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ် Riot! ကိုလာမည့်စက်တင်ဘာလတွင်ဆက်ခံသူအားဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ "ငါတို့မှာရှိတယ်…
သူတို့က Ontario မှာ Kiss ကိုမလိုချင်ဘူး
Kiss သည်ကနေဒါတွင်ကစားလိုသည်၊ ပရိသတ်များကသူတို့ကိုကြည့်ချင်သော်လည်းအာဏာပိုင်များကတူညီမည်မထင်။ New အဖွဲ့
Jazz rock icon Pat Pathenheny ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်
Pat Metheny အဖွဲ့ပေါ်လာသောအခါ jazz မြင်ကွင်းသည်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းမှု၏ဂစ်တာသမား Pat Metheny ဖြစ်သည်။
No Te Va A Gustar နှင့်အင်တာဗျူး
Clarínသတင်းထောက် Pedro Irigoyen သည် No Te Va နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အထူးသံတမန်အဖြစ် Montevideo (ဥရုဂွေး) သို့ခရီးထွက်ခဲ့သည်။
ဂစ်တာသမား Tony Iommi နှင့်အင်တာဗျူး
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကClarínသတင်းစာ၏လူငယ်ဖြည့်စွက်မှုသည်ဒဏ္legendaryာရီဆန်ဆန်အကြမ်းဖက်သူ Tony Iommi နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
The Rasmus အဆိုတော် Lauri နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
Clarínမှသတင်းထောက်သည် Buenos Aires ရှိ Luna Park အားကစားကွင်း၌ဖင်လန်တီးဝိုင်းမတီးမီရက်အနည်းငယ်က ...
မြောက်အမေရိကတေးဂီတအဖွဲ့ Creed ၏မူလအဖွဲ့ဝင်လေး ဦး ဖြစ်သော Scott Stapp, Mark Tremonti, Scott Phillips နှင့် Brian Marshall တို့တွေ့ဆုံကြလိမ့်မည်။
ဒီအင်္ဂလိပ်တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ့ဂစ်တာသမား Graham Coxon ကသူတို့ရဲ့ကြေငြာတင်ဆက်မှုတွေကိုတက်ရောက်မယ့်ပရိသတ်အားလုံးကိုကတိပေးခဲ့တယ်။
Liam Gallagher: "Oasis သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်"
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းဤအင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်း၏ခေါင်းဆောင်နှစ် ဦး တို့အကြားစကားဖလှယ်ခြင်းကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရပြီ။
လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်က David Summers ဦး ဆောင်သောတီးဝိုင်းအဖွဲ့၏ပရောဂျက်အသစ်အကြောင်းငါတို့ပြောခဲ့သည်။
Velvet Revolver: အဆိုတော်မပါသေးဘဲဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်
ကွန်ယက်တွင်တင်ထားသောအချို့သောသတင်းအချက်အလတ်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Velvet Revolvers တွင်အသံမပါသေးပါ။
Green Day "သင်၏ရန်သူကိုသိပါ"
http://www.youtube.com/watch?v=KwUU69sxRvk Ya tenemos el nuevo video de Green Day, «Know your enemy«, primer y pegadizo single de su nuevo disco…
Green Day:“ သင်၏ရန်သူကိုသိပါ” ဗီဒီယိုအစမ်းကြည့်ရှုခြင်း
Green Day ဗီဒီယိုသစ် MTV1- မှထုတ်လွှင့်ပြသရန်နာရီအနည်းငယ်သာလိုပါသေးသည်။
The Killers: DVD အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး cover album ကြေငြာသည်
Las Vegas Quartet သည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ် Day ကိုလူသိများရန်ခရီး၌ပါ ၀ င်သည်ကိုသိသည်။
Untitled (2007) ကိုဆက်ခံမယ့် Korn အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဟာဒီနှစ်မကုန်မီငါတို့ကြားမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Stratovarius, "Deep Unknow" မှအပိုင်း
Stratovarius ဗွီဒီယိုအသစ်: Finns သည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Polaris ၏လက်ရာအသစ်ဖြစ်သော“ Deep Unknow” ကိုပြသသည်။
Liam Gallagher သည်သူ၏အစ်ကိုအားသူ၏တွစ်တာအကောင့်မှတုံ့ပြန်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Noel Gallagher သည် Q မဂ္ဂဇင်းအတွက်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူ၏အစ်ကိုအား“ ရိုင်းစိုင်းသော ...
ချီလီခံစားချက် Kudai ၏ဗွီဒီယိုအသစ်၊ သီချင်းသည် "Die de amor" ဖြစ်ပြီးသူ၏တတိယမြောက် single ဖြစ်သည်။
La Quinta Estaciónသည်ရောင်းအားစံချိန်တင်သန်းတစ်ဝက်ကျော်လွန်သည်
အောင်မြင်သည် - La Quinta Estaciónသည်သူတို့၏လေးအုပ်အနက်တစ်သန်းခွဲပုံကိုရောင်းပြီးနေပြီ။
Noel Gallagher: "Liam ငရဲကိုသွားနိုင်တယ်"
အနာဂတ် Oasis ၏ပြိုကွဲခြင်းကိုကောက်ချက်ချနိုင်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်၎င်း၏ဂစ်တာသမားနှင့်တေးရေးဆရာ Noel Gallagher သည်အေးစက်သောအကြောင်းပြောခဲ့သည်။
"Minotaur": Pixies ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်။
Pixies minimalists များသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Trompe Le Monde မှစတူဒီယိုသစ်ကိုမထုတ်ခဲ့ပါ။
Perry Farrell: "Jane's Addiction ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုသည်မလွယ်ကူပါ"
မကြာသေးမီကပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့သော Jane's Addiction ၏အဆိုတော်နှင့်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သူ Perry Farrel ကသူယခုသဘောပေါက်ပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုတော် Marie Fredriksson ရောဂါတွေ့ရှိပြီးနောက် ၂၀၀၂ ကတည်းကဆွီဒင်နှစ် ဦး Roxette ပြန်လာလိမ့်မည်။
The Poodles က "ဆယ်ယောက်မှာတစ်ယောက်" ကိုပြသည်။
The Swedes The Poodles သည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုမေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် 'Clash of the elements' ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ…
Yes & Asia: 'အလွန်တိုးတက်သောခရီးစဉ်'
လာမယ့်နွေရာသီမှာဟုတ်တယ်၊ တိုးတက်သောရော့ခ်ဂီတရဲ့ရှေ့ဆောင်တီးဝိုင်းတွေထဲကတစ် ဦး ဟာမြောက်အမေရိကကိုထပ်မံခရီးလှည့်လည်မယ်။
La Quinta Estaciónသည်သူတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်ကို Sin Frenos ဟုလူသိများသည်။
အင်္ဂလိပ်စာနယ်ဇင်းမှထုတ်ပြန်သောသတင်းအချက်အလက်များအရ Tom Chaplin ဦး ဆောင်သောတီးဝိုင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားနေသည်။
http://www.youtube.com/watch?v=-SUkDp2yY3I Vuelve El Sueño de Morfeo: los asturianos editarán en mayo su nuevo disco ‘Las cosas que nos hacen sentir…
Iron Maiden သည်သူ၏လေယာဉ်မှဆင်းသည်
သတိထားရမှာက metel host: 'Iron Maiden: Flight 666' သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စုဆောင်းသည့် heavy metal အဖွဲ့၏နောက်ဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။
Pearl Jam: အရင်ကထက်ပိုအလုပ်များတယ်
အလုပ်ရှုပ်သည်? တကယ်ပါပဲ; Seattle quintet သည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အမေရိကန်နေရာအသီးသီး၌ဖျော်ဖြေလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲ၊ …
Moderatto၊ "ငါမြင်ခဲ့တာ" အတွက်ဗီဒီယို
http://www.youtube.com/watch?v=XYgIi-d1y2o Nuevo video de los mexicanos Moderatto, quienes parodian el look y la música de las bandas de glam rock…
El Canto del Loco၊ လူမှုရေးအရစေ့စပ်သည်
El Canto del Loco စည်းလုံးညီညွှတ်မှု၊ မက်ဒရစ်တီးဝိုင်းသည်၎င်းတို့အားအလုပ်အကိုင်များပေးအပ်ရန်ရည်စူးသော Labour Viva အသင်းနှင့်ပူးပေါင်းသည်။
Tokio Hotel သည်၎င်းတို့၏အယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်
ဂျာမန်တေးဂီတအဖွဲ့ Tokio Hotel ၏ပရိသတ်များသည်ကံကောင်းကြသည်။ သူနှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များအဆိုအရသူ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်စတင်ခြင်း ...
http://www.youtube.com/watch?v=TPnnLSXBGnI Este es el más reciente video de Take That: los británicos presentan el clip de su tema «The Garden»,…
"Panic Switch": Silverson Pickups မှဗီဒီယိုအသစ်
Silversun Pickups သည်သူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံး single ကိုဖြန့်ချိသောအခါကမ္ဘာတစ် ၀ န်းလုံး၏အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိသောဤအမေရိကန်အစားထိုးရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ဤရက်သတ္တပတ်များအတွင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအနုပညာရှင်များ၏အယ်လ်ဘမ်များစွာကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒီမှာခရီးသွား ...
ကြေကွဲခြင်း၊ ရိုက်ပုတ်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ Metallica ဗီဒီယိုအသစ်
http://www.youtube.com/watch?v=gjDRa_cgNOo Hace poco, los que para muchos son la banda más grande del actual metal, Metallica, dieronaconocer su…
Miranda! "ပို၍ စမ်းသပ်ဆဲ" အသံကိုရှာသည်
သူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အခြားသူတွေက Argentines Miranda ပါ၊ သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်အယ်လ်ဘမ်က“ စမ်းသပ်မှုပိုများလာလိမ့်မယ်” လို့အာမခံခဲ့တယ်။
The Mars Volta မှအသစ် Octahedron သည်ဇွန်လတွင်ဖြစ်သည်
လက်ရှိဂီတမြင်ကွင်းတွင်အကောင်းဆုံးနှင့်မူရင်းတေးဂီတအဖွဲ့များအနက်တစ်ခုဖြစ်သော The Mars Volta ကကြေငြာခဲ့သည်။
Kasabian သည် Vlad the Impaler ဗီဒီယိုကလစ်ကိုပြသခဲ့သည်
www.youtube.com/watch?v=z0QE7y8-B10 The Leicester မှအင်္ဂလိပ်လူမျိုးများသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သော West ဗီဒီယိုအသစ်ကိုမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Jonas Brothers သည် ၂၀၀၉ Kids 'Choice Awards တွင်အောင်မြင်သည်
အငယ်ဆုံးဖြစ်သော Jonas Brothers တွင်ဒေါသဖြစ်နေသောညီအစ်ကိုများသည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Kids Choice Awards ကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
Damon Albarn ဦး ဆောင်သော Gorillaz နှင့် Jamie Hewlett တို့၏ပုံများတွင်ပုံသွင်းထားသောသူတို့၏ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းပါလိမ့်မည်။